Rima nemambakwedza, iyo yakamirirwa kwenguva refu prequel kune iyo Mbiru dzePasi | Zvazvino Zvinyorwa
Rima nemambakwedza (2020) ndeye prequel kune inonzi inozivikanwa trilogy yemanhoroondo enhoroondo Mbiru dzenyika, Yakagadzirwa naKen Follet. Iyo saga yakatanga mu1989 nemunyori weWales nekutanga kwe Mbiru dzePasi (Zita reChirungu). Gare gare, kuburitswa kwa Nyika isingaperi (2007) uye Mbiru yemoto (2017).
Mabhuku maviri ekutanga akateedzana zvimwe Rima nemambakwedza kutora nzvimbo muKingsbridge, guta rekunyepedzera muEngland. Chikamu chekutanga chakaiswa muzana ramakore rechi997, chechipiri muzana ramakore reVIV uye prequel muna XNUMX. Kune rimwe divi, Mbiru yemoto inotarisa pagakava rechitendero rakakatyamadza Europe mukati mezana ramakore rechi XNUMX.
1 Plot uye vatambi veRima neDawn
1.1 Vatambi vari murima nemambakwedza, sekutaura kwaKen Follet
2 Pfungwa pamusoro pebasa
3 Nezve munyori, Ken Follet
3.1 Kuroora uye kuita kwezvematongerwo enyika
3.2 Kutanga kwebasa rake rekunyora
3.3 Nyeredzi yemusika wekutsikisa
4 Maitiro enhoroondo dzenhoroondo dzaKen Follet
4.0.1 Iyo Century Trilogy
Plot uye mavara e Rima nemambakwedza
Chiito de Manheru neMangwanani inomhanya mumazuva matatu egore 997, zvizere Makore Akasviba muBritain. Panguva iyoyo, iyo ndima yaigara yakakomberedzwa nekupinda kwegungwa kweVikings nekurwiswa kwenyika kweWales.
Zano ine vanhu vatatu vanonyanya kutaurwa: mumongi, musikana wechiNorman mutsva kuEngland nemurume wake uye muvaki wechikepe. Vanosangana muKingsbridge, uko kwavanofanira kusangana nabhishopi anokara ane chinangwa chete kuwedzera simba rake.
The mavara a Rima nemambakwedza, maererano naKen Follet
Munyori akataura mumabvunzurudzo akasiyana siyana kuti Ragna ndiye waanofarira hunhu. Her Iye akanaka uye akangwara Norman mwanasikana wamambo ane simba rakasimba, akaroora murume asina ropa rakanaka. Asina mvumo nevabereki vake, mukadzi wechidiki anofunga kuenda nemurume wake kuEngland. Asi, pavanosvika ikoko, anoona kuti zvinhu hazvisi sezvaaifungidzira.
Iye ane tarenda wechiRungu anogadzira chikepe, murudo naRagna. Asi sezvo iye ari mukadzi akaroorwa, zvirokwazvo iko kukwezva kusina musoro. Zvisinei nerudo rwake rusingadzorwi, Edgar haatsvage nyaradzo kubva kune mumwe mukadzi uye anoramba achimirira mukana wake nemwanasikana wamambo.
Iye mumongi ane chinzvimbo chekuda chinzvimbo: kushandura abbey yake kuita nzvimbo yekudzidza inoyemurwa muEurope yose. Neichi chikonzero, hupenyu hwake chirongwa chinotarisana nekuvaka dzimbahwe rechikoro chake chekurota neraibhurari yayo uye muchina wekudhinda.
Follet anomutsanangura se "mumwe wevanhu vakaipa kwazvo vandakambogadzira… Uri kumuvenga zvakanyanya zvekuti unenge uchimushuvira magumo akaipisisa ”. Saizvozvo, munhu asina kuvimbika, anonyengera, anokara, ane udyire uye haana chero chiratidzo chetsitsi. Nekudaro, chinangwa cheWystan chete kuwedzera simba rake neiro remhuri yake zvisinei kuti ndiani waanotora pamberi pake, chero zvodii.
Pfungwa pamusoro pebasa
Sezvo mune angangoita ese enhoroondo enhoroondo aFollet, vatsoropodzi nevateereri vanoombera - vangangoita vakabatana - simba rekukochekera rebhuku. Pamusoro pezvo, zvinyorwa zvinoyemurika zvakawanikwa nemunyori zvinoonekwa nekuda kwetsananguro dzakadzama dzejira rezvematongerwo enyika netsika zvenguva
Iwo mashoma mazwi anopikisa anonyunyuta nezve rungano rwe misogynistic, akaremerwa (anofungidzirwa) nezvikamu zvekutambudza izvo zvisina kukosha pamhedzisiro. Mukupesana, kumwe kuongorora kwakatsanangura kuti chaizvo iwo mavara asina kuchena uye ane ropa ndidzo dzinomiririra nguva iyo magwaro akaiswa. Yakanga iri nguva yakaoma kwazvo.
Nezve munyori, Ken Follet
Kenneth Martin Follett akaberekerwa muCardiff, Wales, United Kingdom; musi waJune 5, 1949. Munguva yehudiki hwake akatanga kuda kukuru kwekuverenga nekuti vabereki vake, vaiita zvechiKristu, vaimurambidza kuona terevhizheni nekuenda kumamuvhi. Iye nemhuri yake vakatamira ku London Pandaiva nemakore gumi. Ikoko akanyoresa kuUniversity College yeLondon muna 1967 kuti adzidze huzivi.
Paakapedza kudzidza muna 1970, akaita kosi yeutapi venhau ndokutanga kushandira iyo MaSouth Wales Echo kubva kumusha kwake. Mukutanga kwa1974 akaenda Evening Evening muLondon, zvakadaro, akazove asina kugutsikana nehunyanzvi hwenhau. Neichi chikonzero, Follet akapinda munyika yekutsikisa mu Everest Mabhuku uye akatanga kunyora nyaya dzake dzekutanga mukupera kwema70.
Kuroora uye kuita kwezvematongerwo enyika
Muna 1968, Follet akaroora Mary, waaidzidza naye kukoreji muLondon waakagara naye isingasviki makore gumi. Gare gare, muna 1984 akaroora Barbara Hubbard (zita remusikana), nhengo yeLabour Party, sangano rakabatanidzwa naFollet kubvira 1970.
Kutanga kwebasa rake rekunyora
Munguva ye1970s, Follet akaburitsa mabhuku mapfumbamwe pasi pemanyepo Simon Myles, Martin Martinsen, Bernard L Ross naZachary Stone. Mu 1978, Chitsuwa chemadutu -Saina zita rake chairo- yaive poindi yekutanga basa rake repasirese. Makore gumi nerimwe gare gare, bhuku rakaburitswa iro rakaita kuti ritengese pasirese. Mbiru dzenyika.
Nyeredzi yemusika wekutsikisa
Kunze kwenhoroondo dzekare, Follet yave ichizivikanwa nenyaya dzayo yekufungidzira. Mukati meiyi subgenus yekupedzisira, Chinokosha chiri muna Rebecca (1982), Mapapiro egondo (1983), Mupata weShumba (1986) uye Wechipiri mapatya (1997), mamwe emabhuku ake ane mukurumbira. Muchokwadi, ivo vese vane mafirimu uye terevhizheni anoenderana, pamwe ne Ngozi yakanyanya (2001) uye Muchena (2004).
Maitiro enhoroondo dzenhoroondo dzaKen Follet
Nhoroondo dzezvakaitika kare yemunyori weBritish vane hunhu hwe meta-fungidziro kana nhoroondo yenhema, sezvo ivo vachibatanidza protagonists yakatorwa kubva mukufunga kwavo. Zvakangodaro, vazhinji vanotsoropodza vakarumbidza kuvimbika kwaFollet kune zviitiko zvechokwadi (zvakataurwa nevanhu vanofungidzira). Saizvozvo, ivo vanowanzove tsananguro dzakadzama kwazvo uye iva akawandisa.
Kunyangwe hombe nhamba yemapeji (iripowo mu Rima nemambakwedza) Nhoroondo dzaFollet dzinounza yakawanda yekubatana muvaverengi. Aya maitiro echitsauko anogona kuonekwa mumatatu maviri anozivikanwa emunyori weCardifian: Mbiru dzenyika y Zana ramakore.
Trilogy ye The Century
Iyi trilogy nenhamba dzakatengwa kwazvo dzinotenderera zviitiko zvakakosha zvezana ramakore rechiXNUMX. Iwo akateedzana anotanga nezviitiko zvine chekuita neHondo Huru uye chirevo cheProhibition muUnited States (Kudonha kwehofori, 2010). Ipapo Nguva yechando chenyika (2012), inotarisa paHondo Yenyika II apo Chikumbaridzo chekusingaperi (2014) inovhara ingangoita iyo Hondo Yemashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Rima nemambakwedza